OTU ESI EMEGHARIA IHE NGOSI NA POWERPOINT - EKEMEKE - 2019
Gbanwee ihe ngosi na PowerPoint
ColrelDraw bụ editọ ndị na - eserese foto nke nweela nnukwu ewu ewu na azụmahịa ahịa. Dịka, onye nchịkọta akụkọ a na-emepụta broshuọ dị iche iche, akwụkwọ mpịakọta, akwụkwọ edemede, na ihe ndị ọzọ.
Ọzọkwa, CorelDraw nwere ike iji rụọ kaadị azụmahịa, ma ị nwere ike ime ka ha ma dabere na ndebiri pụrụ iche dịnụ, na "site na ọkọlọtọ". Na otu esi eme nke a n'isiokwu a.
Wepu usoro CorelDraw ọhụrụ
Ya mere, ka anyị jiri usoro mmemme malite.
Wụnye onye nchịkọta akụkọ ndị a abụghị ihe siri ike. Iji mee nke a, ịkwesịrị ibudata installer site na saịtị ọrụ ma mee ya. A ga-etinye ihe nrụnye ọzọ na ọnọdụ akpaka.
Mgbe emechara ihe omume ahụ, ị ​​ga-edebanye aha. Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ, ọ ga-ezuru naanị ịbanye.
Ọ bụrụ na enweghị nzere ọ bụla, mejupụta n'ụdị ubi ma pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Ịmepụta kaadị azụmahịa site na iji template
Ya mere, ememme ahụ ka arụnyere, ya mere, ị ga-arụ ọrụ.
Mgbe anyị malitere nchịkọta akụkọ ahụ, anyị na-abanye na windo natara, site na ebe ọrụ ahụ malitere. Ị nwere ike ịhọrọ ụdị ejiji ma ọ bụ mepụta ihe efu.
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịme kaadị azụmahịa, anyị ga-eji ụdị ndeji ejikere. Iji mee nke a, họta iwu "Mepụta site na template" na ngalaba "Kaadị azụmahịa," họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị.
Mgbe ahụ ọ na-anọgide na-ejupụta n'ọhịa ederede.
Otú ọ dị, ikike ịmepụta ihe site na template dị naanị ndị ọrụ nke usoro zuru ezu nke usoro ihe omume ahụ. Maka ndị na-eji ụdị ikpe ahụ ga-eme ka ịchọta kaadị azụmahịa gị onwe gị.
Ịmepụta kaadị azụmaahịa site na ncha
Mgbe ị kwalitere usoro ihe omume ahụ, họrọ "Mepụta" iwu ma debe mpempe akwụkwọ. N'ebe a, ị nwere ike ịhapụ ụkpụrụ ndabara, ebe ọ bụ n'otu mkpụrụ akwụkwọ A4 anyị ga-enwe ike itinye ọtụtụ kaadị azụmahịa n'otu oge.
Ugbu a mepee rectangle na akụkụ nke 90x50 mm. Nke a ga-abụ kaadị anyị n'ọdịnihu.
Ọzọ, anyị na-amụba ọnụ ọgụgụ nke mere na ọ dị mma ịrụ ọrụ.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ ikpebi ihe gbasara kaadị ahụ.
Iji gosipụta ihe ndị nwere ike ime, ka anyị mepụta kaadị azụmaahịa nke anyị ga-eme ka onyinyo dị ka ndabere. Tinyekwa na ozi kọntaktị ya.
Gbanwee kaadị ndabere
Ka anyi malite site n'azụ. Iji mee nke a, họta rectangle anyị wee pịa bọtịnụ òké aka nri. Na menu, họrọ ihe "Njirimara", n'ihi ya, anyị ga-enweta ntọala ndị ọzọ nke ihe ahụ.
N'ebe a, anyị na-ahọrọ iwu "Duputa". Ugbu a, anyị nwere ike ịhọrọ ndabere maka kaadị azụmahịa anyị. N'etiti nhọrọ ndị dị na ya, ọ bụ na-emejupụta, gradient, ikike ịhọrọ ihe oyiyi, yana ederede na ụkpụrụ jupụtara.
Dịka ọmụmaatụ, họta "Jupụta ụkpụrụ zuru ezu." O di nwute, na mbipute ikpe na-abanye na uzo di iche iche, ya mere, oburu na ijujughi ihe ndi ozo, i nwere ike iji ihe ejikere.
Na-arụ ọrụ na ederede
Ọ ugbu a ka ịdebe na ederede azụmahịa azụmahịa na ozi kọntaktị.
Iji mee nke a, jiri iwu "Text", nke a nwere ike ịchọta na ngwaọrụ osi ekpe. Ịdebe mpaghara ederede na ebe kwesịrị ekwesị, tinye data dị mkpa. Na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe font, ụdị ụdị, size, na ndị ọzọ. A na-eme nke a, dịka na ọtụtụ ederede ederede. Họrọ ederede achọrọ ma dezie ihe ndị dị mkpa.
Mgbe ị banyerechara ozi ahụ, ị ​​nwere ike idetuo kaadị azụmahịa ma tinye ọtụtụ akwụkwọ na mpempe akwụkwọ. Ugbu a ọ na-anọgide na-ebipụta na bee.
Hụkwa: mmemme maka ịme kaadị azụmahịa
Ya mere, site n'iji omume dị mfe, ị nwere ike ịmepụta kaadị azụmahịa na nchịkọta akụkọ CorelDraw. N'okwu a, njedebe ikpeazụ ga-adabere na nkà gị na mmemme a.